Ny rakotra tsara indrindra azo alaina amin'ny Amazon Kindle | Ireo mpamaky rehetra
Eder Esteban | | Accessories, Amazon Kindle
Amazon's Kindle angamba no eReaders mahomby indrindra eny an-tsena. Nahavita nandresy mpampiasa an-tapitrisany nandritra ny taona maro izy ireo. Ny fisianà endrika marobe, izay manome ny safidy hisafidianana, ny vidiny mirary ary ny katalaogin'ny boky misy amin'ny Amazon no antony iray mahatonga ny fahombiazany. Mpampiasa maro no miloka amin'ny iray, izay mahatonga azy ireo ho ilaina ny mividy fonony.
Satria ny hevitra dia ny hitondrantsika ny Kindle miaraka amintsika rehefa mandeha manao dia lavitra isika na rehefa mandeha miasa, mba hamaky eo am-pandehanana. Ka ny fividianana fonony dia zava-dehibe. Satria io fomba io dia hiarovantsika azy amin'ny kapoka sy hisorohana ny vovoka hangonina.
Avy eo izahay dia mamela anao misy andiana fonony ho an'ny Kindle izay azo antoka fa hahaliana anao. Misy fonony ho an'ny maodely tsirairay izay hitantsika ankehitriny. Saingy hofaritanay amin'ny vokatra tsirairay ny habeny na ny maodely voalaza fa ny fonony dia natao. Vonona ny hihaona amin'ireo modely ireo?
1 Raharaha Moko Kindle Oasis (Generation 9, Famotsorana 2017)
2 Tranga fiarovana ho an'ny Kindle (Generation faha-7 - Modely 2014)
3 Raharaha Paperwhite Kindle
4 Raharaha Amazon Kindle Paperwhite
5 Tranga Fintie ho an'ny Kindle Oasis 2017
6 Tranga PIXNOR an'ny Amazon Kindle Paperwhite
7 Tranga fiarovana ho an'ny Kindle (Generation faha-8 - Modely 2016)
Raharaha Moko Kindle Oasis (Generation 9, Famotsorana 2017)
Manomboka amin'ity tranga voalohany sy kanto ity isika ho an'ny Kindle Oasis amin'ny taranaka fahasivy, amin'ny kinova 2017. Tranga izay miavaka amin'ny fananana ny sary hosodoko malaza nataon'i Van Gogh, «The Starry Night». Noho izany dia fonosana hafa izay mivoaka amin'ny loko fisaka mahazatra. Ity rakotra ity dia misy fonony mafy izay miaro ny fitaovana amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia mahatohitra ny hatairana sy ny karazana loto rehetra. Ka ny eReader anay dia voaro sy voaro foana.
Ho fanampin'izay, manana fisokafana eo amin'ny farany ambany izy io ahafahantsika mameno ny fitaovana na mampifandray azy amin'ny solosaina nefa tsy manala ilay tranga. Namboarina koa izy io mba hahafahantsika mamaky teny sy miasa amin'ny fotoana rehetra tsy misy fanesorana azy. Ity tranga ity dia misy amin'ny a Tsy misy vokatra..
Tranga fiarovana ho an'ny Kindle (Generation faha-7 - Modely 2014)
Faharoa, mahita safidy nentim-paharazana sy mahazatra isika. Tranga Kindle mainty tsotra noforonina ary tena azo ampiharina. Izy io dia safidy tsara ho an'ireo izay mitady zavatra malina ary ambonin'izay rehetra azo ampiasaina. Ity dia tranga natao ho an'ny taranaka fahafito an'ny Kindle, natomboka tamin'ny taona 2014. Noho izany, tsy mifanaraka amin'ny maodelin'ny taranaka teo aloha izany.
Tranga mahatohitra izay hiaro ny eReader amin'ny dona sy ny gorodona amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izany, ny endriny dia natao mba hahafahantsika mamaky amin'ny tanana iray mandritra ny fampiasantsika azy. Ka tsy hanelingelina amin'ny fotoana rehetra izany. Eo amin'ny faran'ny raharaha dia misy fisokafana, izay mampiharihary ny USB, hahafahantsika mameno na mampifandray azy amin'ny solosaina nefa tsy mila esorintsika. Hita ao amin'ny a vidin'ny 6,99 euros.
Raharaha Paperwhite Kindle
Ny fahatelo amin'ireo fonony amin'ity lisitra ity Izy io dia maodely ho an'ny Kindle Paperwhite 6-inch amin'ny taranaka rehetra. Ka na inona na inona kinovanao, dia hifanaraka amin'ny fitaovanao izany. Sarony vita amin'ny hoditra sentetika miloko mena, mena divay. Noho izany dia tonony izay tsy mahazatra ao amin'irony fonony miloko maizina ireto, fa tsy dia manintona loatra. Noho ny fitaovana anaovana azy dia tsy miala amin'ny tanana izy.
Ankoatra izany, dia rano, hatsembohana ary vovoka. Amin'izay dia tsy hahatratra ny fitaovana amin'ny fotoana rehetra ny loto. Tokony holazaina ihany koa fa mora be ny manadio, ka raha ny fikojakojana azy dia tsy mila fotoana be loatra. Afaka mampiasa ny Paperwhite antsika amin'ny fotoana rehetra isika amin'ny fampiasana fonony, raha ny marina, azontsika atao ny mamadika na mamono ilay fitaovana amin'ny alàlan'ny fanokafana na fanidiana ny sarony fotsiny. Tena mety ny mampiasa azy io. Ity tranga ity dia misy amin'ny vidiny 10,99 euro.
Raharaha Amazon Kindle Paperwhite
Manaraka ny lisitra dia tranga iray hafa ho an'ny Kindle Paperwhite, ao amin'ny dikan-teny avy any 2012 ka hatramin'ny 2017. Ka ireo mpampiasa rehetra misy ny iray amin'ireo kinova ireo an'ny eReader malaza dia ho afaka hampiasa azy io tsy misy olana. Amin'ity tranga ity, miavaka amin'ny famolavolana, miaraka amin'ny sarin'ny talantalam-boky feno boky. Tena mety raha jerena ny vokatra namboarina ity tranga ity. Tranga izay novolavolaina tamin'ny hoditra sentetika, izay manome fanoherana sy miaro ny fitaovana amin'ny fotoana rehetra.
Amin'izay fomba hialantsika fa mahazo kapoka na loto na ranon-javatra manimba azy. Inona koa, mora manadio izy io, ka tsy mila miahiahy momba ny tasy isika. Izy io dia misy fanidiana magnetika tafiditra ao anaty hoditra, ahafahantsika manokatra sy manidy mora foana ny raharaha. Ho fanampin'izany, azontsika atao ny mamadika na mamono ny Kindle rehefa manokatra na manidy ny raharaha isika. Ity tranga ity dia misy amin'ny a vidin'ny 15,99 euros.
Fintie fonosana ho an'ny Oasis Kindle 2017
Modely ho an'ireo mpampiasa nividy ny Kindle Oasis an'ny 2017, an'ny generasi fahasivy an'ny fitaovana Amazon. Miatrika fonony amin'ny loko volontany izahay. Vita amin'ny hoditra sentetika, izay manome fanoherana lehibe azy io, ankoatry ny fisorohana ny loto na ranoka tsy hahatratra ilay fitaovana. Tranga somary midadasika kokoa noho ny maodely hafa izy io, saingy maivana ihany. Noho izany ny fitaterana dia tsotra sy mahazo aina amin'ny fotoana rehetra.
Io dia ahafahantsika mamaky amin'ny tanana iray ary afaka aforeto ilay tranga mba hipetraka amin'ny toerana mitsangana ny Kindle Oasis. Mety raha mila manoratra zavatra iray isika na te-hamaky nefa tsy mila mitazona ilay fitaovana eo am-pelatanantsika amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia fonony tsara kalitao, miaraka amina endrika mahatohitra, mahazatra ary kanto. Safidy ahafantaranao fa tsy hahomby amin'ny lafiny rehetra ianao. Azo alaina ao amin'ny a Tsy misy vokatra..
Tranga PIXNOR an'ny Amazon Kindle Paperwhite
Ny tranga manaraka amin'ny lisitra dia vita amin'ny hoditra tena izy. Izy io dia maodely PIXNOR ho an'ny Kindle Paperwhite, maodely malaza indrindra amin'ny orinasa amerikana. Amin'ity tranga ity dia miatrika tranga iray miavaka amin'izany isika famolavolana falifaly miaraka amina sary vita amin'ny solika. Ka io dia safidy tsara ho an'ireo mpampiasa mitady tranga hafa miaraka amina endrika am-boalohany. Na eo aza ny famolavolana azy, noho ny lokony manga, dia tsy fonony marevaka na marevaka izy io.
Sarona manify izy io, mora apetraka. Na dia manify aza izy io dia hiaro ilay fitaovana tsy hikapoka amin'ny fotoana rehetra. Manohitra ny loto na ranoka koa. Arovy tsara ianao amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Izy io dia manana ny rafitra mamela ny fitaovana hivadika amin'ny fotoana hanokafantsika ny tranga. Ho fanampin'izany, afaka mamaky amin'ny tanana iray isika amin'ny fampiasana ilay tranga, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny manelingelina azy isika rehefa mampiasa ny Kindle. Hita ao amin'ny a Tsy misy vokatra.
Tranga fiarovana ho an'ny Kindle (Generation faha-8 - Modely 2016)
Vitanay izany modely natao ho an'ny maodelin'ny taranaka fahavalo an'ny Amazon eReaders. Miatrika fonosana volondavenona fotsy izahay. Tranga izay natao manokana ho an'ity taranaka fahavalo ity. Ka tsy mifanaraka amin'ny fitaovana amin'ny taranaka hafa izany. Izy io dia manana endrika tsara, izay tena mora apetraka, ary koa mahatohitra tena. Mba hiarovana ny fitaovana amin'ny fotoana rehetra tsy hikapoka na loto.
Rehefa tsy maintsy miampanga ny Kindle isika dia tsy misy olana, satria afaka manohy mampiasa ny raharaha amin'ny fotoana rehetra tsy misy olana isika. Ary indray, araka ny hitantsika tamin'ny maodely hafa, mirehitra ny fitaovana rehefa manokatra ny raharaha izahay. Azontsika atao ny mamaky amin'ny tanana iray raha mitazona ilay fonony, satria manify dia manify, noho izany dia tsy hahazo aina. Ho fanampin'izay, mora be ny mitazona azy ao anaty kitapo na kitapom-bolanao amin'ny fotoana rehetra. Azo alaina ao amin'ny a vidin'ny 24,99 euro ao Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Sarona fandoroana tsara indrindra
Manavao ny eReaders i Casa del Libro, ireo no Tagus Iris, Lira ary Da Vinci vaovao